Xaaladda 4 jirkii Meeydkiisa la Helay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shumacyo loo dhigay geerida wiilka. Foto: Alexandra Svedberg/Sveriges Radio
Xaaladda 4 jirkii Meeydkiisa la Helay
La daabacay tisdag 18 oktober 2011 kl 15.11
Ciidanka ammaanka ayaan illaa hadda weli gacanta ku dhigin cid lagu tuhunsan yahay ciddii ka dambeeysay geeridii afar-jirka ee carriga Ljungby.
Wiilkan afar jirka ah ayaa maalintii axadda 22-kii galabnimo meeydkiisa laga helay meel dhallaanku ku cayaaraan ee aan gurigiisa ka fogeeyn, kadib isaga oo la la'aa dhowr saacadood eyna is dagaaleen walaalkii 17-tii galabnimo ee isla maalintaa.
Shaleyto galabnimadii ayuu boliisku shir-jaraa'id ku sheegay in geerida wiilka afar jirka ah uu ka dambeeyay fal-dembiyeed.
Farsamo-yaqaannada ciidanka ammaanka ayaa baaritaan ku sameeyey goobta laga helay meydka iyadoona sida wararka qaarkood sheegayaan laga helay waxyaabo muhiim u ah baaritaanka. Sidoo kale maanta gelinkii dambe ayuu ciidanka ammaanku gaari kuwa qafilan dhigtay nawaaxigaa, sida uu sheegay Hans Sjöberg, sarkaalka ugu sarreeya ee baaritaankan:
- Gunta laga leeyahay ayaa ah in bulshadu na aragto inaan goob-joog halka ku nahay, islamarkaana ay na soo gaarsiin karaan haddii ey hayaan war-bixin, sida uu Hans Sjöberg sheegay, mar uu u warramayay laanta wararka ee Ekot.